NextMapping | भविष्यको बारेमा चिन्ता कम गर्न PREDICT मोडेल प्रयोग गर्नुहोस्
हामी कोविड १ p महामारीको मोटाईमा छौं र सबै चिन्तित छन्, सबैले विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा परेको प्रभावबाट अन्धा भएको महसुस गरिरहेका छन।
हामी भविष्यको बारेमा चिन्ता कम गर्न मद्दत गर्न PREDICT मोडेल जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छौं।
प्रत्येक उद्योग प्रभावित हुँदैछ ट्राभल उद्योग, बैठक उद्योग, र आपूर्ति श्रृंखला उद्योग सहित केहि नाममा।
अनिश्चितता अनचेक गर्दा यसले ठूलो चिन्ता निम्त्याउँदछ जुन आज खराब निर्णयहरू हुन्छन् जसले भविष्यलाई असर गर्ने छ।
यदि कहिल्यै त्यहाँ 'शान्त रहन' र 'जारी राख्न' समय थियो भने यो हो।
कसैसँग क्रिस्टल बल छैन तथापि हामी एक पाइला फिर्ता लिन र के हुँदैछ र सम्भावित चुनौति र अवसरहरूको विस्तृत दृष्टिकोण लिन सक्दछौं।
गहन अनिश्चितताको समयमा, हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा हुन भनिन्छ अधिक लचिलो, मानसिकता बदल्न र सम्भावित सकारात्मकहरू हेर्न।
यो 'हामी नियन्त्रण गर्न सक्दछौं' भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने र व्यक्तिहरूका लागि के उत्तम हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा कार्य गर्ने समय हो, हामी डाटा कसरी लिभोर गर्न सक्छौं र सूचित सूचनाको आधारमा हामी कसरी निर्णयहरू लिन सक्छौं।
हामी हाम्रो ग्राहकहरूको साथ PREDICT मोडेल प्रयोग गर्दछौं र यस न्यूजलेटरमा, म यसलाई साझेदारी गर्न चाहन्छौं कि कसरी यसलाई व्यक्तिगत रूप वा संगठनात्मक रूपमा लागू गर्ने जब अनिश्चितताको सामना गर्ने।
प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् र PREDICT मोडेलको प्रत्येक भागको लागि सिफारिस गरिएका कार्यहरू लिनुहोस्:
अहिले के भइरहेका घटनाहरूको प्रतिमान के हो? (आईई / सार्स, विश्व युद्ध, / / ​​११)
अहिले के भइरहेको छ त्यसबाट के परिचित छ? (ठूलो अवरोध)
अहिले के भइरहेको छ केसँग चुनौतीहरू छन् र ती विगतका चुनौतिहरूसँग कसरी सम्बन्धित छ? (व्यक्तिगत र व्यापार)
जब ती समान घटनाहरू अहिले अतीतमा भएका थिए यसले के परिवर्तन गर्‍यो? (टाढाको काम बढाउनुहोस्)
विगतमा बाध्य पारिएको परिवर्तनमा 'परिवर्तन' को बान्कीले कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ र परिवर्तन भइरहेको छ कि अब के भइरहेको छ? (आईई / changes / ११ पछि यात्रा परिवर्तनहरू)
अहिले हामी कुन डरलाग्दो डरबाट डराउँछौं? किन? (व्यवसाय प्रभाव / व्यक्तिगत काम / काम प्रभाव)
यी परिवर्तनहरूले प्रतिकूल रूपले प्रभावित हुने खतरामा कुन उद्योगहरू छन्? किन? (यात्रा / बैठकहरू / आपूर्ति श्रृंखला)
यो वर्तमान अनिश्चितता को सम्भावित सकारात्मक के हो?
यसले के कारण मानिसहरूलाई / व्यवसाय गर्न को लागीरहेको छ?
हामी कसरी एक अवसरको रूपमा आफू वा व्यावासायमा बाध्य परिवर्तनहरूको लाभ उठाउन सक्छौं?
हामीले अहिले के गर्न रोकिनु पर्छ?
हामीले अहिले के गर्न सुरू गर्नुपर्छ?
ब्रेनस्टर्म / सबै सरोकारवालाहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस् जस्तै कर्मचारी / ग्राहक / आपूर्तिकर्ताहरू - उनीहरूलाई के आवश्यक छ सोध्नुहोस्। (मतदान / सर्वेक्षण / कुराकानीहरू)
डेटा ब्रेनस्टर्म / सेयरिंगबाट प्याटर्न खोज्नुहोस् र ढाँचाहरूको खोजी गर्नुहोस्।
दृश्य / ड्याशबोर्डको रूपमा डेटा / ढाँचाबाट दिमाग नक्शा सिर्जना गर्नुहोस्।
भिजुअल ड्यासबोर्डको आधारमा तपाइँ / तपाइँको कम्पनी / तपाइँको संस्कृतिको लागि सम्भावित कार्यहरूको रूपमा के हो भनेर छनौट गर्नुहोस्।
सबै सम्भावित कार्यहरूको आधारमा एउटा कार्य योजना बनाउनुहोस् र सबैभन्दा धेरै असरको आधारमा प्राथमिकता दिनुहोस् आज।
प्राथमिकता सूचीमा आधारित स्वयं / टीम / कम्पनीको लागि दैनिक कार्य योजना बनाउनुहोस्।
प्रमुख चुनौतिहरूको साथ सब भन्दा ठूलो अवसर यो एक प्रकाश चम्किन्छ के परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
सबै पछिल्ला चरणहरूमा के स्पष्ट रूपमा बाहिर देखा पर्दछ के अब परिवर्तन गर्न आवश्यक छ? (स्वयं / टीम / संस्कृतिको प्रेरणा बढाउनुहोस्)।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको कम्पनी को ठाउँमा एक दूर दूर कार्य योजना छैन भने कोविड - १ virus भाइरस को लागी यस्तो योजना को लागी बाध्य छ।
कोठामा 'हात्तीहरू' के हुन् जुन अहिलेसम्म कोहीको पनि सामना गर्न सकिदैन तर अब त्यहाँ व्यापक अनिश्चितता छ कि त्यहाँ तुरुन्त आवश्यकता छ?
म / हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दछौं? एक सूची बनाउनुहोस् - के आधारमा तपाइँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ के तपाईं / टीम / कम्पनी यसको बारे मा के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
मलाई / हामीलाई वर्तमान अनिश्चिततालाई सृजनात्मकता र उन्नत सोचाइको अवसरको रूपमा हेर्नबाट रोक्नुको कारण के हो?
के संसाधन वा रणनीतिहरू हामी आफ्नै / हाम्रो टोली / कम्पनीका लागि प्रदान गर्न सक्छौं? (आत्म-देखभाल / प्रेरणा / काम गर्ने नयाँ तरिकाहरू)
यदि हामी अर्को महिना, २ महिना, months महिना अगाडि हेर्छौं भने आज हामीले लिने कार्यहरूले नयाँ भविष्य सिर्जना गर्न सक्दछ?
जब ठूला परिवर्तनहरू हुन्छन् र (त्यो नै अनिश्चितता साँच्चिकै हो) हामी प्राय घुँडा टेक्ने डरमा आधारित प्रतिक्रिया लिन सक्दछौं।
चुनौतीको समयमा हामी कसरी प्रतिक्रिया गर्छौं त्यसले परिवर्तनको माध्यमबाट हामी कसरी लचिलो र चुस्त रहन्छौं भनेर निर्धारण गर्दछ।
डर तर्कहीन छ र यसको वास्तविक भावना हो र हामी प्रेडिक्ट मोडेल जस्ता प्रक्रिया मार्फत यसलाई तार्किक रूपमा सार्न भयलाई शान्त गर्न सक्छौं।
भावनात्मक हिसाबले हामी ध्यान, गहिरो सास फेर्दै, आउटडोर हिँड्न, संगीत सुन्न, केही समयको लागि मिडिया बन्द गर्न, अरूसँग कुरा गरिरहने माध्यमबाट संसाधन गर्न सक्दछौं - ती चीजहरू हामी नियन्त्रण गर्न सक्दछौं।
यी तीव्र समयमा तपाईंको लागि हाम्रो चाहना व्यावहारिक हुनको साथसाथै भविष्यको लागि पनि हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँ हामीले पूर्ण रूपमा धेरै कुरा सिक्यौं र त्यहाँ नयाँ आविष्कारहरू र यस विघटनको परिणाम स्वरूप परिणामहरू हुनेछन्।